HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 7-JULY-2020
Tuesday July 07, 2020 - 09:39:46 in Wararka by Mogadishu Times
RW Kheyre oo Magacaabis sameeyay R/Wasaaraha XFS Md.Xasan Cali Khe yre ayaa u Magacaabay Mukhtar Xusen Max amed (Qooraansay). inuu noqdo maareeya ha mashruuca Aqoonsiga Qaranka. Qoraal kooban oo kasoo ba xay Xafiiska R/Wasaare Khey
RW Kheyre oo Magacaabis sameeyay R/Wasaaraha XFS Md.Xasan Cali Khe yre ayaa u Magacaabay Mukhtar Xusen Max amed (Qooraansay). inuu noqdo maareeya ha mashruuca Aqoonsiga Qaranka. Qoraal kooban oo kasoo ba xay Xafiiska R/Wasaare Khey re ayaa lagu sheegay in xilka loo qaatay Mukhtar Xuseen Maxamed (Qoor aansay). Si uu u soo shiso Hay'adda Aqoon siga Qaranka (National ID Authority) "Mukhtar Xuseen Maxamed (Qooraan say). ayaa loo qaatay inuu noqdo Maareeya ha Mashruuca Aqoonsiga Qaranka (Manag ing Director for the National ID Project), si uu u soo dhiso hay'adda Aqoonsiga Qaranka (National ID Authority), isagoo kaashanaya Xafiiska R/Wasaaraha, Wasaaradda Arrima ha Gudaha iyo Federaalka iyo Guddiyadii dhisnaa. Md.Mukhtar Xuseen Maxamed (Qooraa nsay) ayaa ku dhashay M/Galdogob 1978-dii,waxaana uu heysata dhalashada dalka Norwey, isaga oo sidoo kale mar soo noqd ay Madaxa IT-da (Information Technology) ee Hay'adda Nabadsugidda iyo sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed ee (NISA).
Wasiir Foosiya oo khudbad ka jeedisay Golaha Shacabka
Wasiirka Caafimaadka Somaliya, Foosiya Abiikar Nuur ayaa Shalay hortagtay Xildhiba anada Golaha Shacabka, xilli ay ka dooday een Hindise Sharciyeedka Golaha Mihnadla yaasha Caafimaadka Qaranka.
Shircigan ayaa waxaa soo diyaarisay W/ Caafimaadka, waxaana kol hore loo gudbi yay Gudoonka G/Shacabka, oo manta na Xildhibaanada horkeenay, si ay uga dood an. Xildhibaanada G/Shacab ka ayaa dood ka dib, cod aql abiyad leh ku meel-mariyay Hindise Sharciy eedka Golaha Mihnadlayaasha Caafimaad ka Qaranka.
Gudoomiye Kuxigeenka 1aad ee G/Shac abka, Cabdiweli Sh.Ibraahim Muudey oo shir guddoominayay kulankii Shalay ayaana ku dhawaaqay natiijada codeynta.
Marwo.Foosiya Abiikar Nuur, W/Caafimaad ka Somaliya ayaa Xildhibaanada G/Shacab ka u jeedisay khudbad ay ku faah faahiney say muhiimadda uu Hindise Sharciyeedkan u leeyahay Qaranka, iyadoo dhanka kalana kaga mahad celisay kalsoonida ay u muujiy een.
Sida uu sharcigu qabo waxaa uu Hindise Sharciyeedkan dhaqangeli doonnaa marka uu saxiixo Madaxweynaha JFS, Maxamed C/hi Farmaajo.
Md.Kheyre oo la kulmay Midowga Yurub xilli uu socdo cadaadis la xiriira doorashada
R/Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa Shalay kulan la yeeshay Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya Nicolas Berlanga xilli uu dhawaan kasoo laabtay safar maalmo qa atay uu ku joogay Dala Qatar. Dorraad ayuu Md.Kheyre kasoo laabtay Doha iyadoo ay h lkaas ku soo dhaweeyeen masuuliyiin ka tir san dowladda. Inkastoo kulanka uu la yee shay Shalay Nicolas Berlanga uusan aheyn mid horay looga warqab ay ayaa looga hadlay arri mo badan oo khuseeya Soomaaliya waxaana ugu waaweynaa arrimaha doo rashada oo ay dood badani ka taagan tahay.
Caasimadda Online ayaa ogaatay in R/ Wasaare Xasan Cali Kheyre uu sidoo kale Safiirka M.Yurub kala hadlay arrimo kale oo ku saabsan dib u habeynta Amniga iyo dha meystirka hanaanka deyn cafinta oo heerar fiican lasoo gaarsiiyay.
Kulanka 2da masuul ayaa kusoo aadaya xilli Dorraad uu baaqday shirkii dowladda dhe xe iyo maamul goboleedyada Muqdisho uga furmi lahaa, waxaana si cad u diiday ka qe ybgalka shirkaas labada maamul ee Puntl and iyo Jubbaland oo saluugsan sida ay Baarlamaanka u meel mariyeen matalaadda G/Banaadir.
Beesha caalamka ayaa dowladda ku ca daadineysa inay madax maamul goboleedya da heshiis kala gaaraan arrimaha doorasho oyinka, islamarkaana la joojiyo go’aanada ay qaadanayaan xildhibaanada G/Shacabka.
QM iyo M/Yurub ayaa sidoo kale dhowa an la kulmay guddoomiyaha baarlamanka Soomaaliya ayaga oo ka codsaday in la jooj iyo kulamada baarlamanka ee lagu ansixina yo Q/bada doorashooyinka illaa xal siyaa sa deed ay ka gaaranayaan dowladda& maam ul goboledyada. Xigasho:-caasimadda.net
Guddoomiyaha Xuquuqul Insaanka Puntl and, Maxamed Yuus uf Cali Golaha Wakiil ada D/G/Puntland, ay aa sida qorshaysan Kalfadhigaan dhexdiisa dooranaya Guddoo miyaha Cusub ee Xafiiska Difaacaha Xuqu uqda Aadanaha Puntland oo shanti sanna dood-ba mar la doorto.
Guddoomiyaha haatan xilkaasi haya, Ma xamed Yuusuf Cali oo dadaal xooggan ugu ji ray inuu mar kale soo noqdo ayaa candhuuf tiisa dib u liqay, kadib markii uu loollan adag kala kulmay Madaxtooyada Puntland.
Golaha Xukuumadda Puntland, oo sida Dastuuriga ah soo gudbiya Liiska Musharri xiinta u tartamaya Xafiiska Difaacaha Xuquu qda Aadanaha Puntland, ayaa Liiskaasi ka reebay Guddoomiyaha haatan Maxamed Yuusuf Cali.
Xukuumaddu waxay soo gudbisay 3 Mu sharrax oo kala ah; Wasiirkii hore ee W/Haw eenka Puntland Maryan Axmed Cali oo ka soo jeeda G/Sool, Avv. Siciid Cabdi Mu’min (Siciid CabdiYare) oo ay isku Beel yihiin Ma xamed Yuusuf Cali iyo sidoo kale Faysal Ma hdi oo isna ka soo jeeda Gobolka Sanaag. 3da Musharrax,waxa mid kasta olole & lool lan ugu jiraa, sidii uu kursiga ku hanan la haa,inkastoo aysan weli caddayn Musharr axa X/Puntland riixayso, in loo doorto Gudd oomiyaha Xafiiska Difaacaha Xuquuqda Aadanaha. Xigasho:caasimada.net
Wasiir Bayle oo Xafiiskiisa ku qaabilay Wakiilka Midowga Yurub ee Soomaaliya
Wasiirka maaliyadda XFS Dr.Cabdirax maan Ducaale Bayle ayaa Shalay xafiiskii sa ku qaabilay wakiilka midowga yurub ee Soomaaliya Mudane Nicolas Berlanga.
Wasiirka Bayle ayaa sheegay inay kawa da hadleen dib-u-habeynta arrimaha Maaliy adda iyo taageerada midowga yurub ee miis aaniyadda dalka sidoo kale wasiirka maali yadda waxa uu intaa ku daray inuu uga mah adceliyay taageeradda ay siiyaan midowga yurub Soomaaliya.
"Waxa aan aanta xaru nta wasaaradda ,aaliy adda ku qaabilay Wakiil ka M/Yurub ee Soomaal iya Amb. Nicolas Berlan ga oo ay wada shaqeyn buuxdo naga dhax eyso” "Waxyaabihii aan ka wada hadalnay waxaa ka mid ahaa, dib-u-habeynta Maaliya dda, Taageerada Miisaaniyadda, iyo mahad celinta European Union in Somalia oo si buuxda noo garab taagan. Ayuu ku daray hadalkiisa wasiirka maaliya Dr.Cabdiraxma an Ducaale Bayle.
Midowga Yurub ayaa dalkeyna Soomaal iya ka taageero dhinacyo ay ka mid yihiin hormarinta dhaqaalaha dalka iyo dib udhiska ciidamada qalabka sida.
Qof loo qabtay dilka gabar yar oo meyd keeda laga helay duleedka Godinlabe
Wararka laga helayo D/Godinlabe ee G/Galgaduud ayaa sheegaya in qof loo qa btay dil loo geystay gabar yar oo meydkeeda laga helay duleedka dag mada.gabadhaan meyd keeda la helay oo mag aceeda lagu sheegay Ca a’isha Maxamed Shaan ley isla markaana 11-jir aheyd ayey Ciidama da Booliska dagmada baaritaan dheer kadib u soo qabtay qof haweeney ah oo la sheeg ay iney waalid u aheyd gabadha.
Saraakiisha ku hawlan baaritaanka wa xey sheegeen in lasoo qabtay qof ay uga shakisan yahiin dilka, taasoo la sheegay in ey gabadha u aheyd habaryar, balse ay baaritaan dhab ah ku sameyn doonaan.
Taliye ku-xigeenka Saldhigga Booliska degmada Godinlabe ayaa sheegay iney wali ku hawlan yahiin baaritaanno la xiriira arrinta isla markaana wadatashiyo kadib ay aasi do onaan meydka gabadhaan oo la saaray sida la sheegay geed korkiis.
Mudooyinkii ugu dambeeyay waxaa dal ka gaar ahaan gobollada dhexe kusoo bada nayay tacaddiyada loo geysto haweenka ga ar ahaan kuwa aadka u da’da yar.
Xeer Ilaaliyaha Guud Ee Qaranka Oo Daah Furay Mashruuca Qiimeynta Kaaliyeyaasha Hay’adaha Garsoorka Dalka.
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka ayaa Shalay daah furay mashruuca qiimeynta ka aliyeyaasha Hay’adaha Garsoor ka Dalka. Qiimeyntan waxaa loo gu tala galay in lagu qiimeeyo heerka aqoonta Kaaliyeyaasha Hay’adaha Garsoorka Dalka, sidoo kale waxa ay qeyb ka tahay horumarinta tayada Bahda Garsoorka Dalka.
Qaar ka mid ah Kaaliyeyaasha Hay’ada ha Garsoorka Dalka oo la hadlay Warbaahin ta ayaa soo dhaweeyay imtixaanka laga qaa dayo oo lagu ogaanayo heerka uu gaarsiisa nyahay aqoontooda.
Xeer Ilaaiyaha Guud ee Qaranka Dr.Sula ymaan Maxamed Maxamuud ayaa ka hadl ay muhiimadda uu leeyahay Horumarinta iyo Qiimeynta lagu sameynayo tayada Kaaliyey aasha Hay’adaha Garsoorka Dalka.
‘Waxaan ku faraxsanahay inaan Shalay goob joog ka ahaado horumaritna iyo tayey nta soocoto garsoorka, oo ujeedda laga lee yahay ay tahay in adeega aan bulshada gaa riineyno uu noqdo adeeg tayaysan ku dhisan xirfad iyo aqoon, una adegaya ujeedda iyo himilooyinka nolosha garsoorka uu leeyahay oo sanadkasta aan ku iclaaminayo shirka garsoorka” ayuu yiri Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka.
Doon siday Dad shacab ah oo ku degtay Webi iyo baadi-goob socda
Dalka Nigeria ayaa laga soo warinayaa in ugu yanaa 21 qof laga cabsi qabaa in ay dhinteen ka dib markii dooni ay ku degt ay bariga dhexe ee dalkaasi sida warbaahin ta maxalliga ah ay werisay Shalay Doonta an, ayaa waday rakaab iyo alaabo ku socd ay wabiga Benue ee gobolka Benue, Warar ka intaa ku daraya in doonta ay degtay ka dib markii la saaray tan ka badan taasi oo kentay in ay quusto.
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay doontaasi qalibantay Wararka qaar ayaa tibaaxaya in 23 raka ab ah ay saarnaayeen dhowr qofna wali la la’yahay. Afhayeenka u hadlay booliska Catherine Anene ayaa sheegtay in laba qof ay ka soo badbaadiyeen guudaha wabiga iyagoo sidoo kale wali ku jira baadi goobka &badbaadinta tiro dad ah oo wali lala yahay.
Faahfaahin Iskahorimaad hubeysan oo ku dhacay M/Jowhar
Wararka ka imanaya M/Jowhar ayaa she egaya in iska horimaad hubeysan oo u dhex eeya ciidamada dowlada uu ka dhacay meel ku dhow madaxtooyada Hirshabelle.
Iska horimaadkan ayaa la sheegay inuu ku geeriyooday mid ka mid ah ciidamada booliska M/owh ar halka 3 kale oo mid ka mid ah uu ahaa askari ka tirsan ciidamada AMISOM ee ilaalada ka ah madaxtooyada Hirshabelle ee M/Jowhar ay ku dhaawacmeen.
Rasaas xoog leh oo la isu adeegsaday iska horimaadkan ayaa laga maqlay xaafa daha ay magaalada Jowhar ka kooban tah ay, iyadoo cabsi la soo deristey dadka ku no ol xaafadaha ku dhow dhow halka uu dagaa lku ka dhacay.
Lama oga sababta dhabta ah ee ka dam beysa iska horimaadkan hase yeeshee war arka ayaa waxa ay sheegayaan in uu ka bil owday muran ka dhashay dhul ku yaal afaaf ka hore ee madaxtooyada Hirshabelle.
Dadaalo ay sameeyeen maamulka gobol ka iyo saraakiisha ciidamada amniga ayaa ku guuleystay in la joojiyo dagaalka iyadoo caadi ay ku soo laabatay goobihii dagaalku uu ka dhacay.
Ciidanka Burundi oo qeyb ka ah howl-gal ka nabad ilaalinta M/Afrika Soomaaliya ee AMISOM ayaa deeq Dawo ah gaarsiiyay M/Jowhar ee Caasimadda maamul G/Hirsh abeelle. Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo xuquuqul Insaanka Hirshabeelle, Sacd iyo Maxamed Nuur ayaa AMISOM uga mah ad celisay deeq dan Dawada ah, iya doo sheegtay inay wax weyn ka tari doo nto la dag aallanka Cudurka Corona Virus.
Marwo, Sacdiya ayaa xustay in deeqdani ay jawaab u ahayd codsi ay u jeediyeen ho wl-galka midowga Afrika xubno ka tirsan Bu lshada maxalliga ah ee ku nool Magaalooyin ka Jowhar iyo Mahaddaay, kuwaas oo ku tii rsanaa kaalmada caafimaad ee xarumaha AMISOM.
Madaxa Qaybta 5aad ee AMISOM, Capt an ; Dr, Dionys Zabagenzi, ayaa sheegay in deeqdan loogu tala galay inay ka faa’iidey sato Bulshada rayidka ah, maaddaama ays an awoodin in ay tagaan xarumaha AMIS OM lana xiray goobihii ay ka heli jireen ade egyada Caafimaad.
Xildhibaan Jindi” Madaxtooyada waxaa ka socda Olole Mudo Kororsi ah
Xildhibaan Cabdirisaaq Maxamed Axmed Jindi oo ka tirsan Xildhibaanada Golaha Sha cabka ee baarlamaanka Soom aaliya ayaa sheegay in Gudaha Xarunta Madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ay ka socdaan olo lo lagu raadinayo mudo kororsi.
Waxaa uu sheegay in markii la gaaray xil liga kala guurka ee doorashooyinka la bilaab ay in la ciil ciilo siyaasiyiinta u hanqal tag aya inay ka qeyb gal aan doorashada,hayeeshee Xil dhibaannada uu isaga kamid ya hay aysan aqbaleyn. Xil dhibaanka oo ka qeyb-galayay Barna amij ka baxa Tv-ga Universal ayaa waxaa uu she egay in Madaxda joo gto Villa Soomaaliya ay do onayaan inay muddo 2 sa no ah ku da rsadaan,isla markaana iyaga oo meesha ka saaraya hadalkii Guddoomiyaha Madaxa ba nnaan ee doorashooyinka qaran ka ee ahaa inay u baahan yihiin Guddigooda 13 si doo rasho loo qabto.
Hadalka Xildhibaan Cabdirisaaq Maxam ed Axmed Jindi ayaa waxaa uu kusoo aad ayaa xilli Xubnaha Madasha Xisbiyada Qar an iyo Siyaasiyiinta mucaaradka ay maalm aheen sheegayeen in Madaxtooyada Soom aaliya ay dooneyso muddo kororsi.
Madaxweynaha Kenya oo ku dhowaa qay in la qaaday xayiraadii saarneyd M/ Nayrobi
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Ken ya tta ayaa ku dhowaaqay in la qaaday xayiraa ddii dhanka safarka ee saarneyd qaar ka mid ah magaalooyinka dalka Ke nya. Uhuru Kenyatta ayaa shee gay in la qaadayo laga bilaabo berri oo Talaado ah xayiraadii saarneyd Magaalooyinka Nayrobi, Mombasa iyo Mandheera oo hore loo saaray sababo la xiriira cudurka Covid-19.
Hase yeeshee Uhuru ayaa sheegay in mu ddo 30 maalmood ah lagu daray bandowga xilligii habeenkii ee lagu soo rogay dalkaas si looga hortaggo fiditaanka cudurka Coro na. Duulimaayada gudaha ayuu sheegay Ma da xeynaha Kenya in dib u bilaaban doonto 15-ka bishan July halka duulimaadyada caa lamiga ah la furi doono 1-da bisha Agosto.
Dalka Kenya ayaa sida ay sheegtay was aarada caafimaadka dalkaas ay cudurka Co vid-19 u geeriyoodeen dad gaaraya 164 ru ux halka guud ahaan dadka laga helay cud urka ay gaarayaan 8,067, balse waxaa ka bogsaday cudurka